Plus | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Fifidianana Filohan'ny FJKM : kandida 3 no indray harotsaky ny FATE ?
Ny mpitandrina isany Razafindramanitra Nestor sy Marinasy izay sekretera jeneralin'ny FJKM no voalaza fa isan'ny kandida ho Filohan'ny FJKM tohanan'ny FATE. Miteraka olana lehibe eo amin'ny fandrindrana ny zaikabe izany satria ity sekretera jeneralin'ny Fjkm ity dia isan'ny tomponandraikitra fototra amin'ny fikarakarana ity fihaonam-be any Manakara ity ary dia toa manao fanahiniana manakorontana tanteraka ny momba izany. Ahiana ho tafiditry ny kajy politika maloto ny fifidianana ho filoha satria ankoatra ny fampiasan'ny FATE volabe amin'ny mpizaika amin'izao fotoana dia fantatra fa rehefa tsy tafiditra ho Filoha izany Nestor Razafindramanitra dia efa ny Pastera Marinasy no azon'ny FATE antoka fa ho lany ary mbola miampy ny Profesora Alain Tehindrzanarivelo izay fantatra androany fa sady mpitandrina ihany koa ka natao hanaparitaka ny vato amin'izay fifidianana Filohan'ny FJKM izay.
Ny eo amin'ny toeran'ny Filoha lefitra avy amin'ny laika kosa dia Rajemison Rakotoamaharo sy Benjamin Andriamparany no efa fantapantatra fa hanolo-tena hofidiana amin'izany. Ny Filoha RAVALOMANANA izay nitana io toerana io tao anatin'ny efa-taona moa dia efa nandefa taratasy fialan-tsiny noho ny tsy fahafahany miatrika izao zaikabe any Manakara izao. Hatreto aloha dia tsy mbola ofisialy avokoa ireto filatsahan-kofidiana ireto saingy ny fiasan'ny tsirairay sy ny fifandresen-dahatra mandeha any an-toerana no nazahoana ireo vaovao ireo.
Vaovao tsy marina
Aparitaky ny mpomba ny fitondrana koa amin'izao fotoana fa nitondra fifonana in droa misesy ny mpitandrina Lala Haja Rasendrahasina, ka ny iray amin'izany "dia voalaza fa noho ny fandraisany anjara tamin'ny krizy". Vaovao izay tsy marina velively satria raha ny vaovao marim-pototra avy any an-toerana dia fialan-tsiny mikasika ny tsy fahatomombanan'ny fikarakarana ny zaikabe no nataon'ny Filohan'ny FJKM voalohany ary fialan-tsiny tamin'izay mety tsy fahatomombanana, amin'ny maha-olombelona, tamin'ny fitantanana ny fiangonana nandritran'ny fotoana nitondrany. Ohatra velona amin'izany tsy fahatomombanan'ny fikarakarana izany ny tranga nahazo ireo mpizaika, raha ny vaovao voaray. " Voatondro araka ny fandaharam-potoana manko fa dia amin'ny 1 ora maraina no mifoha ireo mpizaika izay nitoby teny amin'ny FJKM Analakely, mialoha ny hihazoany any Manakara. Voatondro ihany koa araka ny lamina fa dia amin'ny 4 ora maraina no hanainga ireto mpizaika ireto. Tsy hita anefa ireo fiara. Noho izany dia voatery niandry ora 5 izy ireo satria tamin'ny 9 ora vao afaka niainga. Ity fikarakarana ity dia niandreketan'ny SG FJKM", izay voalaza ihany koa fa isan'ireo nanao fifampiraharahana tamin'ny Camille Vital, niaraka tamin'ny Alain Tehindrazanarivelo. Namporisika mafy ny haneken'ny FJKM izany fifampiraharahana izany ny mpitandrina Marinasy sy Tehindrazanarivelo, saingy nanda ny avy amin'ny birao foibe sasany. Raha ny vokatra azo tsapain-tanana aloha hatreto dia ny fijoroan'ny birao hitantana ny synoda lehibe ka ny mpitandrina Andriamahazosoa Amy Irako no voafidy hitantanana izany. Ny Alatsinainy 20 Aogositra sy ny Talata 21 Aogositra kosa no hiroso amin'ny fifidianana ny mpizaika ka ireo mpifidy lehibe 80 no hanomboka izany. Ireto farany mantsy, araka ny fifampifehezana anaty ao amin'ny Fiangonana, no hifidy ireo hitarika ny Birao foibe FJKM mandritra ny 4 taona indray.
Fanabeazana : sintomina hidina ny fahaizan’ny kilonga Malagasy (+vidéo)
Dia mirehareha tokoa ny ministeran’ny fanabeazana fa tsy latsaky ny 90% ny salam-pahafahana tamin’ny fanadinana CEPE farany teo. Na dia efa volana maro aza no tsy nety nampianatra intsoy ny SEMPAMA dia mbola toy ziany ny vokatra azo. Mazava hoazy tokoa fa rehefa ny mpiandry ny efi-trano fanadinana no mandika ny valin’ny laza adina eny amin’ny solaitrabe dia tsara avy hatrany ny vokatra. Isan’ny tranga niseho tamin’ny ivotoeram-panadinana maro izany araka ny vaovao voaray hany ka latsaka ambany dia ambany ny lanjan’ilay fanadinam-panjakana voalohany amin’ny fiainan’ny zaza Malagasy.
Ny dimy volana tsy nampianaran’ny SEMPAMA dia nampitarazoka ny fahavitan’ny fanadaharam-pianarana ka dia voatery ny laza adina no natao « moramora » kokoa noho ny tokony ho izy mba nahafahan’i Manoro Régis sy ny ekipany nidehaka fa nahavita fanadinana na dia mitokona aza ny mpanabe ary tsara ny vokatra. Tsy mbola tafavoaka ny ala anefa ity ministra ity satria dia efa manambana ny tsy hoavy hiatrika ny asany koa ireo mpampianatra niandry ny fanadinana BEPC tamin’ny taona lasa. Araka ny fantatra dia tsy mbola nahazo ny tambin-karamany izy ireo herintaona aty aoriana ary dia nanapa-kevitra fa raha toa ka tsy voavaha ny 18 Aogositra amin’ny mitatao vovonana izany olana izany dia tsy ho tonga any amin’ny « centre d’examen » izy ireo ny Alatsinainy hoavy izao.
Ambovombe le samedi 11 Août 2012 : Ndriarijaona force la main d’une compatriote
Dans un restaurant/bar, il y avait des amis américains, dont une de double nationalité (américaine et malagasy), ont bu une bouteille de sprite en jouant de la carte sur une table dans un coin. Dans ce restaurant, il y avait le Chef d'Etat Major Malagasy Le General NDRIARIJAONA en compagnie de Chef de Région de l'Androy. Ce General est venu demander la dame pour danser le slow avec lui devant son mari. La dame a gentiment répondu qu'elle ne veut pas comme ils sont en train de jouer. Ensuite, le General s'est fâché en menaçant la dame.
Des gardes du corps en compagnie du Chef de Région sont venus chasser la dame et son mari ainsi que ses amis (tous américains) du restaurant sous prétexte qu'elle n'a pas respecté le General en refusant de ne pas danser avec lui. Les gardes du corps ont brutalement chasse la dame en disant: tu ne sais pas de qui il s'agit, c'est le Chef d'état major, Le General NDRIARIJAONA...
Voilà ce qui se passe dans une ville où il n'y a pas des vrais journalistes ni de société civile forte pour interpeller. Au lieu de s'occuper de l'affaire REMENABILA, un Général et un Chef de Région s'en prennent à des innocents américains tout en ignorant le risque d'incident diplomatique qui pourrait survenir.
Famahana ny krizy : hoavy « indray » ny iraky ny SADC
Nivoaka androany ny fanambarana ofisialy avy amin’ny SADC mikasika ny fihaonan’ny Filoha RAVALOMANANA sy i Rajoelina tatsy amin’ny Nosy Seychelles. Ankoatra ny sasinteny diplomatika dia voarakitrra ao anatin’ity fampitam-baovao ity fa nisy ny hevitra nitovizan’ny roa tonta ary nanapa-kevitra ny hifanatona amin’ireo nanao sonia ny tondro zotra rehetra indray ny SADC mba hanangonana ny hevitry ny rehetra mialohan’ny tatitra hatao amin’ireo Filoham-pirenena mpikambana amin’ny 17 sy 18 aogositra hoavy izao.
Tsy tan-dalàna hatramin’ny farany
Marihina fa na dia efa nifanarahan’ny mpanelanelana sy ny andaniny roa aza fa tsy hisy ny fampitam-baovaoa ankoatra ny an’ny SADC dia nataon’i tgv tsinontsinona indray izany ary dia izy tenany no efa nilaza sahady fa « tsy nisy ny zavatra tapaka » raha vao tafavoaka ny fihaonana. Manginy fotsiny ny fanivaivana ny Filoha RAVALOMANANA nandritra ny valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety nataony teo am-pahatongavana teny Ivato. Nambaran’ity mpitarika fanonganam-panjakana ity mantsy fa nanolotra soso-kevitra maro ny tenany hivoahana amin’ny krizy saingy « tsy mbola niova ilay rangahy iny ». Ny Filoha RAVALOMANANA no resahiny amin’io fotoana io satria te-hanaporofo izy fa ilay Filoha naongany tamin’ny basy aman-tafondro dia sakana amin’ny famahana ny krizy rehefa tsy milefitra amin’ny filan-jaza diso hanta ataony. Aminy manko dia tsy tokony hilatsaka ho fidiana ny Filoha RAVALOMANANA ary tsy mahazo miverina an-tanindrazana. Izy mpanongam-panjakana kosa dia sady mijanona ho filohan’ny tetezamita no mahazo milatsaka ho fidiana malalaka ary sahy mangataka ny fanampian’izao tontolo izao hanaovana izany fifidianana izany. Asa raha mifandanja ny fahitan’i tgv sy ny mpanara-dia azy izany fa mbola tsy niala teto Madagasikara akory ny sidina nitondra azy nankao Seychelles dia efa sahy nanambara izany ny tenany.
Ny tohiny …
Andrasana izany izay mety ho vokatry ny iraka hihaona amin’ny mpanao sonia ny tondro zotra eto an-tanindrazana sy ny tatitra hataon’ny SADC amin’ireo mpikambana ao aminy. Na izany aza dia efa mandeha ny resaka fa manomboka leo ny fihetsik’i Rajoelina ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ka efa nanambana ny « hanatitra » ny Filoha RAVALOMANANA eto Madagasikara raha tsy milefitra i tgv. Ahiana ny mety ho fahamarinan’izany satria dia toa efa miomana ny hamindra ny fahefana any amin’ny miaramila ihany koa ity farany raha io no mitranga. Na ho soa na ho ratsy dia ny vahoaka Malagasy aloha no tokony tonga saina satria ny hoavin’ny Fireneny no atao « hena an-tanan-tsaka » amin’izao fotoana. Noho izany andraikitry ny olom-pirenena rehetra ny manao izay hifaranan’izany mba hananganana tontolo mendrika kokoa ho an’ny taranaka fara mandimby na dia mbola mafy aza ny asa hazahoana izany.
COMMUNIQUE_SADC_SEYCHELLES_080812.pdf 198.09 Ko
CEPE : « acte de naissance » no entina miatrika fanadinana ? (+vidéo)
« Chefs de centre » roa no voasambotra tany amin’ny faritra avaratra andrefan’ny Nosy ary maro ireo mpampianatra tsy niatrika ny fiandrasana izao fanadinana natao amboletra izao. Manginy fotsiny ny tsy farisihan’ny Ray aman-dReny nandefa ny kilonga hiatrika izany noho ny ahiahy amin’izay mety ho lanjan’ity fanadinana ity. Tomban’ezaka mikasika ny roa andro voalohany nanaovan’ny ministera ny fanadinana CEPE no nentin’ny SEMPAMA androany ary nilaza izy ireo fa tena tafahoatra ny tsy fahatomombanana tamin’ity indray mitoraka ity.
Misy hatramin’ny mpibata entana sy mpivarotra lasa miandry ireo mpiadina noho ny firaisan-kinan’ny SEMPAMA izay nanapa-kevitra tsy handray anjara amin’izany mihitsy. Isan’ny tena nahatohina ireo mpanabe ihany koa ny fahafantarana fa misy ny lehiben’ny farim-piadidiam-pampianarana sasany no miantso ireo katita hiatrika ny CEPE na dia tsy nahazo fiantsoana sy tsy manana karatra maha-mpianatra aza fa dia « acte de naissance » no fanamarinana entina amin’izany. 171 hatreto ireo mpikatroka SEMPAMA tapaka karama, eny hatramin’ny efa misotro ronono aza, ary efa nanome toky Manoro Régis fa hampitomboina izany araka ny fampitam-baovao nampitain’ny sendikalisat ihany.
IST ho an’ny Filoha RAVALOMANANA : vaky ambatolampy ny laingan’ny FATE
Naparitaka tamina gazety mpomba ny fitondrana maro tao anatin’ny andro vitsy izao fa tsy mahazo mivoaka ny faritanin’i Afrika Atsimo ny Filoha RAVALOMANANA noho ny raharaha 07 febroary. Androany anefa dia nigadona soa aman-tsara atsy amin’ny Nosy Seychelles ny tenany hiatrika ny andiany faharoa amin’ny dinika miaraka amin-dRajoelina mikasika ny fanatanterahana ny andininy sasantsasany amin’ny tondro zotra. Izany hoe tsy nisy olana ny fivoahany tao amin’ny Firenena izay mampiantrano azy amin’izao vanim-potoana lalovan’i Madagasikara izao.
Ny raharaha izay lazaina fa itondrana azy manoloana ny fitsarana Afrikana Tatsimo rahateo tsy mbola misy tohiny satria nosintomin’ny mpisolovava ny AV7 tsy tao anatin’ny fandaharan-draharaha na « rôle » intsony izany ny 01 Aogositra teo, andro tokony niatrehana ny fotoam-pitsarana. Tsy mbola dila ny folo andro ahafahany mamerina na tsia ny antotan-taratsiny noho izany dia miandry aloha ny momba an’iny. Ny voamarina hatreto dia fanaon’ny mpanongam-panjakana hatrany ny manakorontana ny sain’ny vahoaka Malagasy rehefa « voatery » hiatrika dinika hamahana ny krizy ny mpitarika azy ireo. Teo am-piaingana aza ity farany dia sahy nilaza fa « feno ny fepetra » ahafahany milatsaka saingy « tsy afaka milatsaka » kosa ny Filoha RAVALOMANANA « satria enjehin’ny fitsarana ». Izany rehetra izany dia fihetsiketsehana ivelany hanodinana ny saim-bahoaka tsy hahita fa tsy sitrapony ny miatrika ny Filoha RAVALOMANANA saingy tsy afa-miala izy satria tsy maha-vaha olana hatreto ny amboletra fanaony. Raha mikasika io fihaonana io manokana indray dia tsy misy ny tokony hampiroaroa saina ny Malagasy maro an’isa satria efa nanome toky ny Filoha fa tsy hanaiky « ni-ni » mandrakizay. Amin’zao fotoana izao mantsy dia maro ny miezaka manaparitaka fa mihodina manodidina an’io ny fanapahan-kevitra horaisina atsy Seychelles saingy tsy misy tsy mahalala fa fanaovana zinona ny zon’ny Malagasy hifidy izay ankatoaviny hitondra ny Firenena izany. Inoana rahateo fa tsy adala ny SADC izay mitarika ny fanelanelanana ka hiroso amina vahaolana tsy mitondra fitoniana toy izany. Raha ny Amerikana manokana dia efa nilaza fa mitsipaka ny filatsahan’i tgv satria naka fitondrana an-keriny izy ny 2009 saingy rahatoa ka tsy azo idovirana izay dia mitaky ny hazahoan’ny Filoha RAVALOMANANA hilatsaka ho fidiana ihany koa izy ireo mba tsy hisian’ny mizana tsindrian’ila amin’ny famahana ny krizy eto Madagasikara.
Olan’ny anjerimanontolo : natomboka ny fiarahan’ny hery mampiodina (+vidéos)
Nanomboka androany ny fiarahan’ny hery velona telo mampiodina ny tontolon’ny fampianarana ambony eto an-drenivohitra sy eto Madagasikara manontolo rehetra mihitsy. Raha samy efa nanao ny fitakiany avokoa izy ireo saingy tsy nisy nihaino hatreto. Mahatsiaro tena tsy misy antenaina intsony izy ireo ka voatery nampiakatra ny herin’ny tolona ataon’izy ireo. Izao fiarahan’ny sendikan’ny mpampianatra mpikaroka, ny mpandraharaha ary ny mpianatra izao dia atao hampiakarana ny feon’ny anjerimanontolo rehetra momba ny aretin’ny fampianarana ambony.
Ho an’ny mpampianatra sy ny mpandraharaha dia ny mikasika indrindra ny saran’ny hatsembohany izay tsy ahitany fahatoniana velively. Nisy ohatra ny didy hitsivolana nampanantenana ny tambin-karama tamin’ny fotoana teo aloha saingy tsy mbola hita ny vokany hatreto. Ny mpandraharaha kosa dia tsy mahatsiaro milamin-tsaina satria voatery takiana lalandava ny karama isam-bolana vao azo.
Ny mpianatra kosa dia tena mikaikaika satria manahy amin’ny hoaviny. Ela loatra ny tsy firindran’ny anjerimanontolo ka zary mitarika amin’ny tsy fitovian-jon’ny zanaka Malagasy. Misy ny mianatra nefa misy koa ny tsy afaka miatrika izany noho ny aretin’ny mpampianatra. Angatahin’izy ireo arak’izany ny hamahana haingana io olana io mba tsy hisian’ny mpianatra midina an-dalam-be intsony.
Ivato Aéroport - 28 jolay 2012 alina : nikoropaka ny DST
Na dia mbola nifamahofaho be ihany aza ny vaovao mikasika ny dian’ny vadin’ny Filoha RAVALOMANANA dia nivonona ny niaro azy amin’izay ny vahoaka mpandala ny ara-dalàna. Hatramin’ny tamin’ny 10 ora sy sasany alina mantsy dia tsy nisy ny vaovao marim-pototra mikasika ny fiverenan-dRamatoa Lalao RAVALOMANANA mianaka eto Madagasikara. Ny hany vaovao voaray sy voamarina dia tsy neken’ny fanjakana tao Thaïlande ny fangatahan’ny FATE ny hampiantranoana azy mianaka tany an-toerana satria tsy ara-dalàna ny fomba nandefasana azy ireo tany ary raha ny lalàna iraisam-pirenena dia tokony ny sidina nitondra azy nihazo an’i Bangkok ihany no mitondra azy miverina any amin’ny toerana niaingana izany hoe eto Antananarivo.
Ny zava-nisy teny amin’ny seranam-piaramanidina koa dia nampiseho ny tsy fisian’izay vaovao marim-pototra izay satria dia tazana teny an-toerana na ny hainoamanjery mpomba ny FATE fa indrindra hery famoretana avy ao amin’ny DST. Rehefa tonga ary ny sidina an’ny Air Madagascar izay tokony nitondra azy mianaka ka tsy tao anatiny izy ireo dia niala am-pilaminana teo amin’ny seranam-piaramanidina ny vahoaka satria ny fiarovana ny momba azy ireo no tena anton-dia teny an-toerana. Raha ny vaovao miparitaka any anaty tranonkala ankehitriny izay mbola mila fanamarinana dia sidina an’ny Thaï Airlines no nitondra azy mianaka nihazo an’i Afrika Atsimo rehefa voatery nipetraka ora maro tao Bangkok izy ireo.
Tsy tokony miraviravy tanana izay manana an'Andriamanitra (+vidéos)
"Tsy tokony mahatsiaro tena ho ilaozan'Andriamanitra ny Malagasy" hoy ny Pastera Randriamisata Roger. Nomena tombony manokana amin'ny zavatra maro Madagasikara ary ny fitsapana izay lalovana amin'izao fotoana dia tokony hanentana ny rehetra handinin-tena amin'ny hoavy. Fotoam-baka lehibe no natao tao amin'ny FJKM Ambatoroka androany ho fangataham-pitahiana ho an'ny Firenena manoloana ny dinilka izay atao any Seychelles sy ny trangan-javatra feno fahalovana miha-mahazo laka eto amintsika. Mpitondra fivavahana vitsivitsy no niara-niaky fa amin'ny fotoana toy izao indrindra no tokony iasana mafy ary dia nikarakara izao fotoam-pivavahana izao.
Sary FJKM Ambatoroka
Ny Finoana dia tokony ho entina hijoro amin'ny fahamarinana ary ampinga miaro ny olo-marina. Raha miaraka amin'Andriamanitra, hoy ny fampianarana izay nentin'ny Pastera Jonah, dia manana hery mihoatra lavitra noho izay tanjaka amin'ny maha-olombelona. Mila fandraisana andriakitra ny toerana misy ny Firenentsika amin'izao fotoana izao hoy hatrany ity mpitandrina ity. Noho izany indrindra no ampaherezana ny Kristianina tsy hilofika na hilefitra manoloana ny ady amin'ny ratsy.
Kaporaly Black : novonoina fa natahorana hilaza ny marina ?
"Vahia Tsitotomainty Ralouis Denis no tena anarany. Mpiambina akaiky sy mahatoky ny ministry ny foloalindahy teo aloha , ny jeneraly Noël Rakotonandrasana, no ahafantaran’ny maro azy. Io jeneraly io moa izay mifonja eny Antanimora ankehitriny satria nandray anjara tamin’ilay lazaina fa fanonganam-panjakana tao amin’ny BANI Ivato ny volana novambra 2010. Voalaza fa ny haka fanjakana sy ny hamoaka ireo gadra politika no tanjon’ny kaporaly Black raha nitarika iny "fikomiana" teny amin’ny RFI iny. Avy any Toliara no fiaviany saingy lehibe teny Ivato izy, notaizan’ny dadatoany izay zandary tao amin’ny GSIS, nianatra tao amin’ny CEG Ivato. Eny Amboaroy Antehiroka izy no mipetraka, vita soratra telo volana lasa izay ary mitoe-jaza ny vadiny araka ny loharanom-baovao. Efa niteraka roa tamin’ny vadiny teo aloha ihany koa ny kaporaly Black".
Nanaitra ny maro, indrindra ireo mpanao gazety tafajanona hariva teny Ivato ny alahady teo, ny fandrenesana fa namoy ny ainy koa ny Kaporaly Black. Raha ny hitan’ny rehetra teny an-toerana ary nohamarin’ireo miaramilan’ny EMMO sasantsasany dia voatifitra teo amin’ny tongony ity manamboninahitra lefitra ity tamin’ny fotoana nazahaoana sambo-belona azy. Mbola nisy aza ny nahita ny fiara tsy mataho-dalana nitondra azy teny amin’ny manodidina an’Ambodimita teny ho eny raha iny ho entina hotsaboina iny ralehilahy. Akory anefa ny hagagan’ny maro fa jeneraly avy amin’ny tafika Malagasy iray no nanambara tao amin’ny fahitalavim-panjakana fa lavo ny kaporaly Black.
Fanontaniana maro no mipetraka ankehitriny : inona no nahafaty azy ? Sa niakatra indray ny haromotan’ny bebasy ka nanaparany ny herisetrany ity manamboninahitra lefitra efa maratra mafy ? Sa niniana novonoina mihitsy mba tsy hamoaka ny tsiambaratelon’iny raharaha RFI Ivato iny ? Isan’ny manelingelina ny mpanongam-panjakana mantsy ny olona sahy milaza ny marina toa ny nataon’ny Lt-Kol Charles Andrianasoavina ka dia vitan’ny FATE mihitsy ny manapitra ny ainy mba tsy hisian’ny ampamoaka any aoriana. Anjaran’ny mpanara-baovao no mandinika ny zava-mitranga amin’ny alalan’ny tohin’ny tantara. Ny hita maso aloha amin’izao fotoana dia tsy nasiana lanjany ny razan’ity kaporaly ity miohatra an’ilay kapiteny nalefa nanao vela-pandrika tao anatin’ny tobin’ny RFI na dia samy miaramila Malagasy lavo tao anaty ady aza izy ireo. Misy manohitohina ny fitondrana angamba ny zavatra notakiany tamin’iny hetsika notarihiny iny. Ankoatra izay dia tsy misy aloha hatreto ny fanazavana amin’ny fomba ofisialy mikasika ny nahalavo ny Kaporaly na dia ho fanajana ny fianakaviany sy ny zon’ny vahoaka Malagasy hahalala ny marina fotsiny aza.